UZANELE Mbokazi uchaze injabulo yakhe engena emkhakheni wezinkampani zamabhizinisi amakhulu ngemva kokuqokwa njengelungu lebhodi yeVisual International Holdings Isithombe: SITHUNYELWE
Nokubongwa Phenyane | June 7, 2021
UJABULISA okwengane encane usomabhizinisi waseThekwini uZanele Mbokazi, njengoba inkampani iVisual International holdings, ikhiphe isimemezelo sokuthi useyingxenye yebhodi layo.
Le nkampani ingaphasi kwezinye ezikwiJohannesburgh Stock Exchange (JSE), uMbokazi uveze ukuthi igxile kakhulu emkhakheni wezokudayiswa nokuthuthukiswa kwemizi namabhizinisi.
Uthe ungene kuyo ngemuva kokuqala enye esiza abantu bathuthuke emkhakheni wokuzenzela imali. Uma echaza uNksz Mbokazi, uthi okumjabulisa kakhulu ukuthi nguyena yedwa owesifazane futhi uzosebenzisana nabantu abamkantshubomvu kwezamabhizinisi okubalwa uDkt Ruben Richards, Charles Robertson, Nathi Zuma nabanye.
“Bengihlala ngisho ukuthi ngelinye ilanga ngiyafuna ukusiza abantu bakwazi ukuzenzela imali njengoba sihlupheka kakhulu, abanye bethu inhlupheko bazalelwa kuyona. Sekuyisikhathi sokuthi kuphele lokho. Ngakho eminyakeni ewu-19, ngisemkhakheni webhizinisi kuyangijabulisa ukufinyelela kulesi sigaba sokuthi sengizosiza abantu bakwazi ukuzenzela imali yabo.
“Ngifinyelela lapho engikhona manje yingoba bengisebenza nezinkampani eziningi ngizenzela umsebenzi wokukhangisa ngamabhizinisi awo, ngiphinde ngiwaxhumanise nabezindaba ukuze aziwe. Kula[ho engikwaze khona ukuthi ngazi ngalezi zinkampani njengoba sengigcina ngiyingxenye yazo manje,” kusho uNksz Mbokazi.
Uveze ukuthi ubheke phambili ekusebenzeni nabantu abamnyama ukuze bazi kangcono ngalemikhakha.
“Le mikhakha yomibili ngizokwenza konke okusemandleni ukuthi abantu bazi kangcono ngayo futhi ngiyabasiza ekutheni basebenze ukuze bazuze kuyona Ngiyabonga kakhulu kuNkulunkulu ngesibusiso anginike sona ngiyathemba ukuthi konke kuzohamba kahle, ngijabule angizenzisi,” kuchaza usomabhizinisi.
Uthembise abalandeli bakhe ukuthi bangalinge bathuke njengoba imicimbi akade eyihlela esazoqhubeka nayo.